MM Abiy Ahimad: ''Fooyya'insi dhaabbilee haqaa dhiyeenyatti ifa ta'a'' - BBC News Afaan Oromoo
MM Abiy Ahimad: ''Fooyya'insi dhaabbilee haqaa dhiyeenyatti ifa ta'a''
MM Abiy Ahimad lammiilee kuma 20 olitti lakka'aman biyyoota Awurooppaa garagaraa irraa walitti qabamaniif Jarmanii, Firaankfartiitti haasa'a taasisaniiru.
Ministirri Muummeen haasa'a isaanii yeroo hedduu itti beekaman jaalalaa fi tokkummaa irratti kan xiyyeeffate ture.
Kana malees haasawa isaanii keessatti dhaabbileen haqaa biyyattii keessatti uummata biratti amanamoo akka tahanif tarkaanfileen fooyya'insaa akka taasifaman dubbataniiru.
Walitti dhufeenya Itoophiyaa fi G-20
Gama haqaa, haala qabiinsa mirgoota namoomaa, yaada bilisaan ibsachuu irratti baayyeetu nu hafa kan jedhan MM Abiy, ''Haqaa fi demokraasiin waan barbadaman qofaaf hin argaman, dhaabbilee kana mirkaneessan ijaaruun malee,'' jedhaniiru.
''Dhaabbileen kana mirkaneessan bakka hin ijaaramnetti, haqa hawwinu osoo hintaane, seermaleessummaatu dagaaga.'' jedhaniiru.
Yeroo dhiyoottis damee haqaarratti murteewwan itti fufinsa qaban akka fudhataman ibsaniiru. Madaalliin saalaas damee haqaa keessatti akka irra deebi'amus dubbataniiru.
Boordii filannoo fooyyeessuufis hojjetamaa jira jedhaniiru. ''Boordiin filannoo bilisaa fi amanamoo akka tahuuf fooyya'insi seeraa fi caasaa godhamaa jira.''
Kana malees, ''Rifoormii dhaabbilee tikaafi ittisa biyyaa irratti hojjatamaa jira. Ittisni biyyaa akka cimuuf biyyoota biraa waliin hojachaa jirra,'' jedhaniiru.
Gama kaaniin ammoo, ''Mindaa keessan osoo hintaanee, ammas guyyaan dolaara tokko akka nuuf kennitan isin gaafanna,'' jechuun hojii doolaara tokko guyyaa tokkotti dhiyeenya kan jalqabame irrattis ergaa dabarsaniiru.
Haasawa oonnachiisaa falmaan mirga namoomaa biyya Ameerikaa kan ture Maartin Lutar Kiing itti beekamu haala fakkaatuun taasisaniin ammoo isa itti aanu dubbataniiru:
Waggoota kudhan booda, Itoophiyaa rakkooshee hunda seenaa goote, hin kufneefi kan dubatti hin deebine... kan Afrikaan ittiin boonan, faayaa addunyaa nan arga.
Abdiin qaba!... lammiileen biyyattii baqannaa fi rakkoolee garagaraan qe'eesaanii dhiisanii biyyoota adda addaatti faca'anii jiran... biyyasaanii iddoo fedhanitti jaalalaa fi ollaa gaarii tahanii yeroon itti jiraatan fagoo miti.
Abdiin qaba!... Dargaggoonni Itoophiyaa abdii hin mirkaanoofne Awurooppaarraa qabaniif jecha, gammoojjii Sahaaraafi Galaana (Bahaara) Mediteeraaniyaan qaxxaamuruun isaanii xumura argata.
Ijoolleen keenya Awurooppaatti daawwannaaf malee, yeroon itti baqatanii dhufan ni hafa.
Abdiin qaba!...hundi keenya gara qalbii keenyaatti deebi'uun, isa kaleessaa araaraan goolabnee, boruuf ammoo abdii horachuun; biyya itti boonnu ni ijaarra.
Abdii nan qaba, nan amanas!
Itoophiyaan garee G-20 Compact jedhamanitti dabalamte
Dr Abiy: 'Itoophiyaan jijjirama seena qabeessa irratti argamti'